သတိထားရမယ့် ကိုဗစ်နောက်ဆက်တွဲပြဿနာများ | OnDoctor
ကိုဗစ်ဖြစ်စဉ်က ရောဂါလက္ခဏာ ပိုမိုပြင်းထန်လေလေ နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေကို ပိုပြီးခံရလေလေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
ကိုဗစ် ပျောက်ကင်းသွားတဲ့သူတွေအနေနဲ့ ကိုဗစ်‌ရဲ့ ရောဂါ လက္ခဏာတွေ ပျောက်ကင်းသွားတဲ့အခါမှာ နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ ဘာတွေဆက်ဖြစ်နိုင်မလဲဆိုတာ အမေးများလာကြပါတယ်။
ကိုဗစ်ဖြစ်ဖူးသူတချို့ဟာ ကိုဗစ်ဖြစ်ပြီး သက်သာလာတဲ့တိုင်အောင် နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ အားမရှိခြင်း၊ လှုပ်ရှားတဲ့အခါမောခြင်း၊ နှုန်းနေခြင်း စသဖြင့် ပြဿနာတွေ ခံစား‌ရတယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။ အများစုက လေးပတ်မှ နှစ်လ၊ အချို့ဆိုရင် ခြောက်လလောက်ထိ ခံစားရတတ်ပါတယ်။
ဒီလိုမျိုး ဖြစ်တာကို Long COVID, Long-haul COVID, Post-acute COVID, Chronic COVID စသဖြင့် ခေါ်ကြပါတယ်။
ကိုဗစ်ဖြစ်ပြီး နောက်ဆက်တွဲ ဘာတွေဆက်ဖြစ်နိုင်လဲ??
ကိုဗစ်ဖြစ်နေစဉ် ခံစားနေရတာတွေ ဆက်ပြီး ခံနေရတာရှိသလို လက္ခဏာအသစ်တွေ ခံစားရလာတာလည်း ရှိနိုင်ပါတယ်။ ကိုဗစ်ဖြစ်စဉ်က ရောဂါလက္ခဏာ ပိုမိုပြင်းထန်လေလေ နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေကို ပိုပြီး ခံရလေလေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ လူနည်းစုကတော့ ကိုဗစ်ဖြစ်စဉ် ဘာလက္ခဏာမှမပြဘဲ ပျောက်သွားပြီးမှ နောက်ဆက်တွဲ ပြဿနာတွေကို ခံစားရတာလည်း ရှိပါသေးတယ်။
• အသက်ရှူမဝခြင်း၊ မောခြင်း
• ပင်ပန်း နွမ်းနယ်ခြင်း၊ အမြဲနုန်းနေခြင်း
• ကိုယ်လက်များ မသယ်နိုင်အောင် ညောင်းညာကိုက်ခဲခြင်း
• နှလုံးခုန်မြန်နေခြင်း၊ ရင်တုန်ခြင်း
• အဆစ်အမြစ်များ ကိုက်ခဲခြင်း
• အနံ့‌ပျောက်ပြီး ပြန်ရမလာခြင်း
• စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာတွေအနေနဲ့ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း၊ အာရုံစူးစိုက်မရခြင်း
• အဖျားဆက်ရှိနေခြင်း စတာတွေကို တစ်ယောက်တစ်မျိုး မတူအောင် ခံစားကြရပါတယ်။
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဟာ အဆုတ်တစ်ခုကိုတင်မဟုတ်ဘဲ ခန္ဓာကိုယ်တွင်းက ကိုယ်တွင်း ‌အင်္ဂါ‌တွေကိုပါ တိုက်ခိုက်နိုင်တာမို့ မိမိရဲ့ ကိုယ်ခံအားက ပြန်လည် တိုက်ထုတ်ရတဲ့အခါ ကိုယ်ခန္ဓာအနှံ့ရောင်ရမ်းမှု ( Inflammation) တွေကို ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။
ကိုဗစ်ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အပေါ် သက်ရောက်မှုများ
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဟာ အဆုတ်တစ်ခုကိုတင်မဟုတ်ဘဲ ခန္ဓာကိုယ်တွင်းက ကိုယ်တွင်း ‌အင်္ဂါ‌တွေကိုပါ တိုက်ခိုက်နိုင်တာမို့ မိမိရဲ့ ကိုယ်ခံအားက ပြန်လည် တိုက်ထုတ်ရတဲ့အခါ ကိုယ်ခန္ဓာအနှံ့ရောင်ရမ်းမှု ( Inflammation) တွေကို ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ ဘာတွေဖြစ်နိုင်လဲဆိုရင်-
• ဦးနှောက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဆိုရင်လည်း Guillain-barrè Syndrome လို့ ခေါ်တဲ့ လေဖြတ်သလို ခြေလက်များ အားနည်းခြင်း၊ ထုံကျဉ်ခြင်း
• ကျောက်ကပ် ပျက်စီးခြင်း စသဖြင့် ကိုယ်တွင်း အင်္ဂါတွေကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။
ဒီလိုကိုယ်တွင်းကလီစာတွေ အကုန်လုံး ထိတာကို Multisystem Inflammatory Syndrome လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်ရပ်ဟာ လူနည်းစု အထူးသဖြင့် ကလေးတွေမှာ တွေ့ရတတ်တယ်လို့ ဆိုထားပေမယ့် တွေ့ရခဲပါတယ်။
ဘယ်သူတွေမှာ နောက်ဆက်တွဲ ပြဿနာတွေ ပိုဆိုးမလဲ??
ဆေးရုံတက်ရလောက်တဲ့ထိ ရောဂါ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ခံစားရသူတွေမှာ သူတို့ပြန်လည်သက်သာလာတဲ့ အချိန်ထိ နောက်ဆက်တွဲ ပြဿနာတွေကို သူများတွေထက်ပိုပြီး ခံစားကြရပါတယ်။ ဆေးရုံကဆင်းပြီး အိမ်ပြန်ရောက်လာတဲ့တိုင် အလွန်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်နေတတ်ခြင်း၊ အားမရှိခြင်း၊ နုန်းခြင်းအပြင် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေအနေနဲ့ စိတ်ဖိစီးခြင်း၊ အာရုံမစူးစိုက်နိုင်တော့ခြင်း၊ Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) လို့ခေါ်တဲ့ အလွန်စိတ်ထိခိုက်ရာမှ ဖြစ်လာတဲ့စိတ်ရောဂါ စတာတွေကို သူများတွေထက် ပိုခံစားရတတ်ပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်တာဟာ အထူးကြပ်မတ်ဆောင် (ICU) ထဲက ထွက်လာတဲ့သူတွေမှာ ပိုအဖြစ်များတတ်ကြပါတယ်။
ဘယ်လို အခြေအနေမျိုးဆို သတိထားရမလဲ??
ပုံမှန်အားဖြင့် အများစု ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတဲ့ နောက်ဆက်တွဲ လက္ခဏာတွေ ဖြစ်တဲ့ နုန်းခြင်း၊ အားမရှိခြင်း၊ ချောင်းဆိုးခြင်း စသဖြင့် လက္ခဏာတွေဟာ များသောအားဖြင့် စိုးရိမ်ဖို့မလိုပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ မပေါ့ဆဘဲ လိုရင်လိုသလို ကုသမှုခံယူသင့်ပါတယ်။
• လှုပ်ရှားလိုက်တဲ့အခါ အောက်ဆီဂျင်ပမာဏ ပုံမှန်ထက် ၃ % ကျခြင်း
စတာတွေရှိနေရင် သိနားလည်တဲ့ ဆရာဝန်နဲ့ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။
ကိုဗစ်နောက်ဆက်တွဲနမိုးနီးယားရောဂါကို ဘယ်လိုကျော်ဖြတ်ခဲ့ရလဲ ပြောပြလာတဲ့ စီစဉ်တင်ဆက်သူကောင်းထက်ဇော်